Masar oo xabsi daa’in ku xukuntay qaar kamid ah tageerayaasha madaxweynihi hore ee dalkaas – The Voice of Northeastern Kenya
Masar oo xabsi daa’in ku xukuntay qaar kamid ah tageerayaasha madaxweynihi hore ee dalkaas
Star FM October 29, 2016
Maxkamadd kutaala waddanka Masar ayaa waxa ay xukun ku riday labo qof oo kamid ah tageerayaasha madaxweynihi hore ee waddanka Masar kaas oo xukunka laga tuuray Mohamed Mursi.
Laba qof oo kamid ahayd tageerayaasha Mursi kuwaas oo lagu soo eedeeyay in ay ka qeyb qaaten rabshadihi daba socday cinqilaabka military ee xukunka looga tuuray Mursi ayaa waxa lagu riday xukun xabsi daa’in ah halka 15 qof oo kalena lagu xukumay xabsi 15 sano ah.
Madaxweyne Mursi ayaa xukunka laga tuuray kadib marki dalkaas ay ka dhaceen dibad baxyo aad u waa weynaa oo ay dhigaayen dad ka soo horjeeda xukumadiisa waxana ay taas keentay in biisha july ee sanadka 2013-ka ay militariga waddankaas ee u horkacaayay madaxweynaha waqti xaadirkan ee dalkaas Abdelfatax Al sisi ay afgambiyaan madaxweynihi ugu horeeyay abid ee qab dimuqraadiyad ah loo soo doorto.
Wixii ka dambeeyay cinqilaabki military ee ka dhacay dalkaas ayaa waxa ay xukumadda waddankaas ka arrimiso ay ku hawlanayd xir xiritaanka iyo xukun ku ridida tageerayaasha xisbiga muslimiinta walaalooway.
← Hal meyd oo kamid ahaa dadki lagu weeraray Countiga Mandera oo aan wali la aqoonsanin
Ciidamadda shiicada oo sheegay in ay dagaal u gali doonan sida ay ku xoreeyn lahaayen magaalada Mosul →